Diyaaradaha Reer Galbeedka Oo Duqayn Culus Ka Gaystay Gobol Ka Tirsan Somalia. | Hangool News
Diyaaradaha Reer Galbeedka Oo Duqayn Culus Ka Gaystay Gobol Ka Tirsan Somalia.
Hargeisa(HNG)Wararka laga helaayo Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa waxay sheegayaan in duqaymo kala duwan ay maanta ka gaysteen diyaaradaha dagaalka ee Reer Galbeedka, iyadoona garaacay goobo ay ku sugnaayeen Xoogaga Ururka Al Shabaab.
Warar is khilaafsan, ayaa ka soo baxaaya inta goobood ee la garaacay. Wararka qaar waxay sheegayaan in la duqeeyay laba goobood oo ku dhow Degmada Qoryooley, halka warar kalana ay sheegayaan in illaa saddex goobood la garaacay.
C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), Gudoomiyihii Hore Ee Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa sheegay in la duqeeyay saddex goobood, meel ka mid ahna uu shir uga socday Ururka Al Shabaab.
C/qaadir Siidii oo la hadlay warbaahinta, ayaa yidhii “Duqaynta 1-aad waxay ka dhacday meel la yiraahdo Dhiig Beerta oo ku taala inta u dhaxeyso Xero 1-aad iyo Warta Boojaalow, halkaas oo ay duhurkii ku shirayeen nimankii nabadiidka ahaa.”
Waxa kaloo uu yiri “Duqaynta labaad waxay galabta ka kala dhacday Keli Liibaan iyo Dharshiinley. Meelahan waxaa duqeymaha ka gaystay diyaaradaha Drones-ka Mareykanka, bartilmaameyd inay u ahaayeen ayaa muuqato.”
Waxaa uu intaa ku daray “Anaga ma sheegi karno cidda lala beegsaday duqaymaha iyo waxyeelada ka soo gaartay, laakiin waxaan xaqiijineynaa in saddexdaasi goobood ay duqaymo ka gaysteen Drones-ka Mareykanka.”
Madaxa Arrimaha Bulshada Ee Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Cumar Maxamuud Cilmi (Cumar Carabey), ayaa sheegay in duqayntii maanta ay waxyeelo ka soo gaartay Ururka Al Shabaab.
“Waxaan maqalnay in diyaaradaha duqaymaha gaystay ay bambooyin waawayn tuurayeen. Duqaymahan waxaa laga maqlaayay meelaha aadka uga fog fog Deegaanadaasi.” Ayuu yiri Madaxa Arrimaha Bulshada Gobolka Shabellaha Hoose.
“Dadka deegaanka oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen in Al Shabaab ay illaa afar gaari kala degtay dadkii shacabka ahaa ee la socday. Baabuurtaas waxay ku daad-gureysteen dhaawacyadooda.” Ayuu yiri Cumar Maxamuud Cilmi.
“Ciidan badan oo Al Shabaab ka tirsan ayaa duqaynta ka dib gaaray Deegaanka Dhiig Beerta, waxaa la leeyahay waxay ka eryeen dadkii deganaa agagaaraha meelaha la duqeeyay, si aan macluumaad badan looga helin jabka meesha ka soo gaaray.” Ayuu sii raaciyay Cumar Carabey oo siyaabooyin kala duwan ula hadlay Warbaahinta.
Gobolka Shabellaha Hoose oo muddooyinkanba ay dib ugu soo xoogeysanayeen Ururka Al Shabaab, ayaa noqday midka sida wayn loogu beegsado xubnaha ka tirsan mintidiinta.